के चाहन्छन् यौन सम्पर्कका बेला महिला ? कस्तो खोज्छन् पुरुषको भूमिका ? - E ALL NEPAL
के चाहन्छन् यौन सम्पर्कका बेला महिला ? कस्तो खोज्छन् पुरुषको भूमिका ?
एजेन्सी । पछिल्लो वर्ष मानिसको आधारभूत आवश्यकता भित्र हेरिने गरिएको यौन सम्पर्क । जसरी खान, बस्न, लाउन, शिक्षा, स्वास्थ्यमात्रै होइन मानिसको आवश्यकतामा यौन सम्पर्कलाई पनि हेर्ने गरिएको छ । यसप्रति सभ्य र अनुशासनको भने ख्याल गर्नु पहिलो शर्त हो । केही समय अघि प्रकाशित एक अध्ययनकाअनुसार महिलाले आफ्नो जीवनमा फरक–फरक खालको यौन अनुभव गर्न चाहान्छन् । उनीहरु यौनका विषयमा धेरै नै अनौंठा कुराहरु सोच्ने गरेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । जस्तैः चरम सन्तुष्टि, आसन, यौनिक अभ्यासलगायत थुप्रै कुराबारे युवतीहरु जिज्ञासु हुन्छन् । युवतीहरुले यौनका विषयमा बनाउने केही मनोविज्ञानबारे एक अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो छः
१. सुहाग रातः पहिलो यौन सम्बन्धबारे उनीहरु सधैँ सोचिरहन्छन् । आफूले मन पराएको पुरुषसँग वा भनौं कल्पनाको राजकुमारसँग सुहागरातको परिकल्पना हरेकजसो स्त्रीहरुले गरेका हुन्छन् ।